Iyiphi indiza ephuphayo esibhakabhakeni. Ukuqondisa kahle amaphupho.
Ukuchazwa kwamaphupho: indiza iyaphupha ngani
Kuthiwani uma uphupha ngendiza? Indlela yokuqonda iphupho mayelana nezindiza?
Kusukela esikhathini esidlule, ukushayela kwenza abantu baphumelele, futhi isibhakabhaka - into ehloniphekile, efinyeleleka kuphela kumandla aphakeme, noma abalungile. Okokugcina, okuwukuthi, kwakuwukuqala ukuqeda uhambo lokuphila emhlabeni. Ngokuyinhloko, lokhu kuyisignali enhle, ekhombisa impumelelo eseduze.
Ukuze uqonde ukuthi iyiphi indiza ephuphayo, kuyadingeka ucabange ngokusekelwe emibonweni evamile yabantu mayelana nezindiza, izinkanyezi nezindiza, ikakhulukazi. Liwuphawu lokukhuphuka ngokomoya nangokwenyama. Isibhakabhaka liwuphawu. Kungasho umgomo, umzamo, umphumela wokuphela.
Kwabesifazane, uma ubona indiza esibhakabhakeni ephusheni - cishe njalo kusho impumelelo empilweni yakho siqu. Kukhona okuhlukile, ngoba izimo kanye nemininingwane yamaphupho kungahluka. Ukuqhubeka kulokhu, ukuhumusha nakho kuyashintsha.
Mayelana nokuthi kusho ukuthini ukundiza indiza ephusheni, funda lapha .
Ake sibheke ukuthi yiziphi izindiza eziqondene nabesifazane.
uma ubona indiza emi endaweni yokupaka, e-hangar noma emgwaqweni, ngokushesha uzothola ithuba noma isidingo sokuphumula emsebenzini wakho wansuku zonke. Ngokuvamile iziphupho ezinjalo zivakashelwe abantu abakhathele impilo yansuku zonke, abaye bephupha isikhathi eside sokuthatha iholidi, kodwa konke kuhluleka;
lapho indiza ehamba phezu kwakho iphupha, lokhu kungase kusho isengozini esiseduze ukuthi uzohlangana ngokungazelelwe. Ingozi enjalo, ngokuvamile, ingavela kubantu abangajwayelekile, noma abangajwayelekile. Gwema ngeke kusebenze, ngakho kufanele ulungele. Uma lophupha engumfana osemusha olungiselela umshado, khona-ke kungenzeka kube nenkinga ekulungiseleleni umcimbi womshado, noma kuyoba nengxabano nomlingani ozayo;
esimweni lapho uphupha mayelana nokushayela endizeni, lokhu kuchazwa njengesibonakaliso esihle, okukhombisa impumelelo emsebenzini wakho. Kubantu bebhizinisi, isibonakaliso esinjalo simnandi ikakhulukazi, njengoba sisho izingxoxo eziphumelelayo, siphethe amadili. Kuzo izinceku zikahulumeni, lokhu kunyuke izinga lezemisebenzi, kanti kwabanye abantu ingxabano enzima ukuthi esikhathini esizayo umsebenzi uzokwenyuka;
Uma wenza indiza ende ngezindiza, esikhathini esizayo kuyoba umatasa kakhulu futhi umsebenzi omude, imiphumela azokwaneliseka ngayo. Akukhona ngempela ukuthi umsebenzi uzohlobana nomsebenzi wakho. Kungaba ukukhulumisana kwesigamu esingaphambene, isibonelo;
uma ubona ephusheni ukuthi indiza iwa kanjani, khona-ke ulungele ukunye ukuncipha kwimali engenayo, imiphumela, impumelelo. Uma umphuphi egibela indiza ngesikhathi sokushayeka, kusho into efanayo, kodwa ngezwi elimnyama kakhulu. Nakuba ezimweni eziningi lesi simo sibi, abanye abahumushi abahumusha basichaza isibonakaliso esinjalo futhi njengesikhathi esihle. Kukholelwa ukuthi ngesikhathi esifushane umuntu ovela ocansini ohlukile uyavuma kuwe ngemizwa yabo.
uma ugibele ibhanoyi eliphahlazekile - lindele inkinga esikhathini esizayo esiseduze. Bangakuthola kunoma iyiphi indawo yokuphila. Into enhle ukuthi izinkinga ezinjalo ngeke zihlale isikhathi eside futhi maduzane zikhohliwe;
uma usesigodini sezindiza - esikhathini esizayo esiseduze uzobe uhambisane nempumelelo ezindabeni zothando;
ngesikhathi sezindiza, bheka ku-porthole - ngaleyo ndlela uyaziswa ukuthi awunandaba nabantu abaseduze nawe nalabo abaseduze nawe. Kuyafaneleka ukucabanga futhi ukuthatha ukunakekelwa nokufudumala okungaphezulu.
Njengoba ubona, ngokuyiningi kakhulu, lezi zibonakaliso ezinhle. Ngakho-ke, ngesikhathi esilandelayo lapho uphupha indiza, akufanele ubuke leli qhinga. Yiba nendiza enhle!
Iyini i-rose ephupha encwadini yephupho?
Kuthiwani uma amazinyo akho ewa ephusheni?
Iyini iphupho lamakhukhamba - incazelo kanye nencazelo yokulala
Ubaba ofile ufika ephusheni, yini lokhu?
Iyini ikati elifanekisela iphupho?
Isinkwa siphupha ngani: ukuhumusha okuyisisekelo
Ukubulala umuntu: indlela yokuhumusha leli phupho?
Ukususwa kwezinwele ekhaleni
Yiziphi izingubo ongakhetha kuzo, uqhubeke nosuku lothando
Cutlets in inhlama
Imibono engcono kakhulu yokwenza amaJapane: nsuku zonke, i-anime, ukwakheka kwe-geisha
Uthando ngokusho kohlelo
Ingane yayinobuthi ngenxa yokudla kwezingane
Ukulungiselela i-EGE ngesiNgisi
I-Quinoa ne-avocado nezithelo ezomisiwe
Ucwaningo lwesimo sokucindezeleka kwabesifazane esikhathini sokuhamba kwesikhathi
UMikhail Terekhin ulungele ukuqala ubuhlobo noKsenia Borodina
Imikhiqizo ye-Top-4 eyonakalisa isikhumba sakho
I-Eurovision 2017: ukusabela okunganele kwe-Ukraine kuya ku-Yulia Samoilova
I-Potato Soup Recipe
Indlela yokuhlobisa igumbi lonyaka omusha ngezandla zakho?
Indlela yokwenza amafutha aphunga ekhaya kusuka kakhukhunathi?